Yemahara vhezheni yeLastPass ichave iine mashoma maficha | Linux Vakapindwa muropa
Tiri kurarama munyika ine mapassword akawanda. Pini yeATM, password yekupinda muhurongwa hwekushandisa, kodhi yekuvhura nhare, mapassword emasocial network uye zvichingodaro. Kune izvi zvinofanirwa kuwedzerwa iyo DNI nhamba, nhamba yekuzivisa mutero, dzakasiyana nhamba dzevadzidzi, mazuva ekupera emakadhi echikwereti uye zviitiko zvemhuri.
Mamaneja epassword akauya kuzogadzirisa dambudziko iriku. Sezvo ivo vari akawanda-mudziyo uye vachibvumira data kuti riunzwe uye kutumirwa kunze kwenyika, isu tinongofanirwa kurangarira password inovavhura.
1 Iyo yemahara vhezheni yeLastPass
2 Kubuditsa kunze data rako uye kuvhara account yako
3 Dzimwe nzira kune yemahara vhezheni yeLastPass
Iyo yemahara vhezheni yeLastPass
LastPass maneja wepassword iyo umwe wangu Isaac akaisanganisira runyorwa rwako ezve kugadzirwa kurudziro. Iyo yemahara vhezheni inogona kushandiswa kubva kubhurawuza kana sekunze kwekushandisa uye inosanganisira iko kugona-kuzadza mafomu. Iyo premium vhezheni inosanganisa kunyeverwa nezvekuti edu maemail kero anoonekwa mune akafumurwa password dhatabhesi, inotsigira akawanda-factor chokwadi uye inogonesa kuwana kune mumwe mushandisi kana zvashata. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuchengetedza 1 gigabyte yedata mugore.
Kune vazhinji vashandisi vekumba, iyo yemahara vhezheni yakakwana, kana kuti zvirinani yaive yakwana.
Kubva munaKurume 16, kambani inoita shanduko mumitemo yayo uye kuti iwane vamwe vanobhadhara vashandisi yakafunga kudzikamisa mashandiro emahara Ekupedzisira maakaundi. Kubva pane shanduko idzi, izvo pasina mubvunzo dzisingazofadze vatengi, mushandisi wega wega Unogona chete kushandisa LastPass mahara pane imwe mhando yechigadzirwa: makomputa kana nhare mbozha. Ndokunge, chero iwe unoshandisa account kune yega yega kifaa kana iwe unotsvaga mumwe multiplatform maneja. Zvakare, vashandisi vemahara vanogona kukanganwa nezve rutsigiro rweemail.
Zvinoenderana neruzivo rwunopihwa nekambani, kana uine zvishandiso zvinoverengeka zvine account yako yemahara, chishandiso chinoshanda chichava chekutanga chaunopinda nacho kubva munaKurume 16, 2021. Zvisinei, mushandisi wega wega achave nemikana mitatu yekuchinja uye awane imwe sarudzo inonyanya kubatsira kwavari.
Sekureva kwevamwe vaongorori, chinangwa cheLastPass (icho chakachinja varidzi munguva pfupi yapfuura) kuwedzera huwandu hwevashandisi mamirioni makumi maviri nemashanu vanobhadhara kushandiswa.
Zvisinei, dai ndaishandisa, ndaitsvaga shanduko. Maererano zvakaziviswa muZvemari Nguva, Kune manomwe trackers muLastPass Android app, kusanganisira ina kubva kuGoogle uye nevamwe vanotora data kumakambani ekutengesa. Nepo vashandisi veLastPass veapp vanogona kusarudza kusashandisa trackers, open source maapplication haasanganisi chero.
Kubuditsa kunze data rako uye kuvhara account yako
Kunze kwekunge iwe uchida kushandura ese mapassword uye nekuaisa iwo manenji mune nyowani maneja, zvakanakisa kushandisa iyo yekunze sarudzo. Vanenge vese maneja epassword vanotsigira iyo CSV fomati. Kuti utore mapassword ako, maitiro acho anotevera:
Ita shuwa kuti iwe une YekupedzisiraPass yekuwedzera yakaiswa kune yako browser.
Dzvanya Yepamberi Akaunti Sarudzo Export. Sarudza kutumira kunze se CSV
Ichakukumbira iwe tenzi password. Unogona kudhawunirodha iyo faira uye kuendesa kune maneja wesarudzo yako.
Paunenge iwe wave uine chokwadi chekuti iyo data iri mune nyowani maneja, unogona kudzima account yako nekuenda ku peji ino. Rangarira kuti maitiro acho haachinjiki.
Dzimwe nzira kune yemahara vhezheni yeLastPass
Panguva dzakasiyana siyana, ini nevamwe vangu neni takakurudzira dzakasiyana nzira dzakavhurika sosi. Kuita ongororo nekukurumidza isu tinogona kutaura.
KeepPass: Ukatsvaga paGoogle kana kuGoogle Play Store, uchaona zita richiteverwa nemavara akasiyana. Iyo yekutanga vhezheni yaiwanikwa chete yeWindows, iyo XC vhezheni yeWindows, Linux uye Mac uye vhezheni DX ye Android. Vese vatatu vanogona kuchinjana mafaera.
Bitwarden: Iyo ine modhi yakafanana neiyo yeLastPass, chinhu chega chekuti vhezheni yemahara ine zvakawanda zvinoshanda uye chirongwa ichi chakavhurwa sosi. Kubatsira kukuru pamusoro peKeePass ndekwekuti inowirirana mugore pachinzvimbo chekuisa kunze uye kutumira kunze password mafaira. Ine shanduro yeWindows, Linux, Mac, nharembozha, uye zvinowedzeredzwa kune ese makuru mabhurawuza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yemahara vhezheni yeLastPass ichave iine mashoma maficha. Dzimwe nzira
Guillermo Burastero akadaro
Ini ndinoshandisa Bitwarden paLinux, paWindows uye pane yangu Android foni. Ose ari mushanduro yayo yakazvimiririra uye se plugin yeFirefox uye Chrome mabhurawuza. Iyo inogona kutoshandiswa kuburikidza newebhu. Iyo inoshanda, yakachengeteka uye yakavhurika sosi. Pamusoro pekuchengetedza zvinyorwa zvewebhusaiti, unogona kusevha makadhi, manotsi akachengeteka, uye zvitupa zvakachengetedzeka. Iyo inoshandisa yakasimba peer-to-peer cryptography uye inowirirana zvakakwana.
Muchidimbu iri rakanakisa uye rinokurudzirwa zvakanyanya.
Pindura Guillermo Burastero
Ehe, zviri kufamba mushe. Asi zvese zviri mukati megore hazvina kuchengetedzeka, rimwe zuva ma bitwarden maseva anotsemurwa uye akaonekana. Ini ndinoda keepassxc, ini ndinoshandisa iyo paLinux uye Android. Iyo haina gore, asi imwe haisi kuchinja kana kuwedzera mapassword ega ega maviri neatatu, saka kana paine shanduko ndinotumira pasiwedhi faira uye ndinonyora zvakare pakombuta yandinoda. Ini ndiri anti-gore uye kunyanya neruzivo ruzivo. Ini handichengetedze epamoyo mapassword iwe kana mubrowser.
Dai iwe waive wakasindimara seni uyo akatotakura mashoma ekutyaira ekunze, nharembozha uye mapiritsi, iwe waizokoshesa gore zvishoma zvishoma.
Vivaldi 3.7 inovandudza mashandiro uye inowedzera rutsigiro rweApple's M1